siteadmin, Author at khabarbox.com.np - Page7of 74khabarbox.com.np
Posted 3:40 am by siteadmin & filed under राजनीति.
काठमाडौं – प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) पक्राउ परेमा प्रचलित कानुनअनुसार उनीमाथि जन्मकैद सजाय हुने भएको छ। फागुन २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउँदै उसका सबै गतिविधि नियन्त्रणमा संगठित र फौजदारी अपराधसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुने घोषणा गरिसकेको छ। ‘सरकारले विप्लव समूहका गतिविधि विध्वंसात्मक र आपराधिक भएको घोषणा… Read more »
हतियारसहित फेसबुकमा तस्बिर पोष्ट गर्ने सैनिकमाथि कारवाही
Posted 2:53 am by siteadmin & filed under सामाजिक.
काठमाडौं । फेसबुकमा जथाभावी पोष्ट गर्ने एक सैनिक कारवाहीमा परेका छन् । उनले चलाउँदैं आएको फेसबुक समेत बन्द गरिएको छ । सैनिक मिडिया नीतिविपरीत हतियार बोकेको तस्बिर सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गर्ने सैनिक कुचीकार सूर्यनारायण यादवमाथि नेपाली सेनाले कारवाही गरेको हो । मिडिया नीतिविपरीत यादवले सैनिक तथा सिभिल पोसाकमा विभिन्न हतियार तथा उपकरणहरुसहित खिचिएका तस्बिर… Read more »
खराव सडकका कारण सुनाकोठीमा दुर्घटना २ घाइते
Posted 12:40 am by siteadmin & filed under सामाजिक.
६ चैत्र ०७५,सुनाकोठी । ललितपुरको ठेचो र सुनाकोठीको सिमा क्षेत्र बाङ्गेधारा ओरालोमा बा. १ ह. ४२८४ नम्बरको टेम्पो दुर्घटना हुुँदा टेम्पोमा सवार २ जना घाइते भएका छन् । महानगरिय प्रहरी वृत्त चापागाँउले दिएको जानकारी अनुसार पाटन वर्ष २० की भक्तपुर बस्ने एलिसा शाही र वर्ष ६३ का ठेचोका चन्द्र वहादुर गोले घाइते भई पाटन अस्पतालमा… Read more »
साबधान !! तारकेश्वरका दुई कुखुरा पोल्ट्रीफार्ममा बर्डफ्लु भएको पुष्टि
Posted 2:13 pm by siteadmin & filed under स्वास्थ्य.
तारकेश्वर–७ स्थित बस्नेत टोलका श्यामसन्दुर बस्नेतको सागर पोल्ट्रीफार्म र श्यामकुमार बस्नेतको आकाश पोल्ट्रीफार्मका कुखरामा बर्डफ्लु भएको पुष्टि भएपछि २८ हजार कुखुरा नष्ट गरिएको नगर पशुशाखा प्रमुख डा जयप्रकाश राय यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत वर्ष पनि यहाँ हाँसमा बर्डफ्लुको सङ्क्रमण देखिएको थियो । पुनः कुखुरामा सङ्क्रमण देखिएको कारण अहिलेसम्मको अध्ययनबाट पत्ता लगाउन नसकेको… Read more »
Posted 2:02 pm by siteadmin & filed under राजनीति.
काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद गगन थापासँग काम गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईंलाई अवसर छ।नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्य मन्त्रीसमेत रहेका थापाले सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्न इच्छुकबाट आवेदन मागेका छन्। सांसदको कार्यालयमा बसेर अध्ययन, अनुसन्धान र नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्न चाहनेहरूले प्रशिक्षार्थी (इन्टर्न) बन्न आवेदन दिन सक्ने सांसद थापाले बताए। थापाले खोलेको सांसद… Read more »
सुनाकोठी सडकनजिक पाटी बनेपछि विवाद
Posted 4:35 am by siteadmin & filed under Uncategorized, सामाजिक.
पुरातत्व विभाग स्मारक संरक्षण शाखाको सहमतीपछि सुनाकोठी संरक्षण समूहले चालु सडकसँगै जोडेर पाटी पुर्ननिर्माण गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । संरक्षण समूहलाई पुरातत्व विभागले २०७४ माघ ९ गते पत्र पठाएर चलानी नम्बर १३४८ पत्र मार्फत सहमती दिएका थियो । पत्रमा उल्येख भए अनुसार जग नखोली पुर्ननिमाण गर्नु पर्ने उल्येख छ । सो पालना गर्दा सडकबाट… Read more »
रगत दिनुस, रिचार्जकार्ड लिनुस्
Posted 2:10 am by siteadmin & filed under सामाजिक.
रगत दान गरेर पैसा पाउनु भएको छ ? छैन होला । अव पाउनु हुनेछ रु.१०० रुपैयाको रिचार्ज कार्ड । यही फागुन २५ गते ललितपुरको ठैवस्थित फुल्चोकी स्कूलपरिसरमा आयोजना हुने रक्तदान कार्यक्रममा रगत दान गर्ने दातालाई रु. १ सय रुपैयाको रिचार्ज कार्ड दिन लागिएको हो । रक्तदान कार्यक्रम नेपाल रेडक्रस ठैव उपशाखा रहेको छ भने निशुल्क… Read more »
चापागाँउ सडक बनाउन फेरि आन्दोलन
Posted 3:15 pm by siteadmin & filed under सामाजिक.
सडक कालोपत्रे नहुँदा सास्ती खेप्नु परेको भन्दै ठेचोका स्थानीय आन्दोलित भएका छन् । सडक विभागले कालोपत्रे गर्ने भन्दै पुरानो कालोपत्रे निकालेर अलपत्र छोड्दा स्थानीय बासिन्दा धुलो धुवामा बस्नु परेको गुनासो छ । गत कार्तिक महिनामा सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दै स्थानीयबासी सडक बन्द गरेर आन्दोलन गरेपछि फागुनसम्म कालोपत्रे सहमती भएको थियो । शनिबार ललितपुर ठेचोका… Read more »